ဆူရာနမ်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်း (SPF) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဆူရာနမ်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်း (SPF) ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် liabilities နှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများသီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ပေးထားပါတယ်။ မဆိုနိုင်ငံခြားသားဆူရာနမ်နေထိုင်ကြဘူးသူကိုသူသို့မဟုတ်သူမ၏မိသားစုအကြိုးတစ် SPF ဖန်တီးလိမ့်မည်။
ဆူရာနမ် 1975 အတွက်လွတ်လပ်သောဖြစ်လာရှေ့တော်၌ထိုနယ်သာလန်ပိုင်နက်ဟောင်းတစ်ဦးဒမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နယ်သာလန်ဆူရာနမ်အတွက်ရှိခဲ့ပါတယ်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကဒီသေးငယ်တဲ့တောင်အမေရိကနိုင်ငံအတွင်းရှိများစွာသောအဆောက်အဦးများ၏ဗိသုကာများကတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်, ဒတျချြင်း၏တရားဝင်ဘာသာစကားနှင့်တိုင်းပြည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်ဒတ်ခ်ျအရပ်ဘက်ဥပဒေများကိုမွေးစားဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကတစ်ဦးတအိမ်တည်းဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ပါလီမန်နှင့်အတူတစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ကြောင့်တရားဝင်က "ဆူရာနမ်သမ္မတနိုင်ငံ" ဟုခေါ်သည်။
ဆူရာနမ်ဟောင်းတစ်ဦးကဗြိတိသျှကိုလိုနီင်း၏တရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့်အတူ "ဗြိတိန်ဟွန်ဒူးရပ်စ်" ဟုခေါ်ခဲ့သောဂိုင်ယာနာတို့ကနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ ဆူရာနမ်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နောက်ထပ်တိုင်းပြည်ဘရာဇီးပေါ်တူဂီက၎င်း၏တရားဝင်ဘာသာစကားသည်အဘယ်မှာရှိဟောင်းတစ်ဦးပေါ်တူဂီကိုလိုနီဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်ဂီယာနာအခြားနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်နှင့်၎င်း၏အမည်ကိုအဖြစ်ပြင်သစ်ကိုလိုနီဖြစ်ဖို့အသုံးပြုဆိုလို။ ဤရွေ့ကားလေးနိုင်ငံများကလက်တင်အမေရိက၏အားလုံးအတွက်တစ်ခုတည်းသော Non-စပိန်စကားပြောနိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးကဆူရာနမ်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်း (SPF) အကျိုးကျေးဇူးများကိုဤအမျိုးအစားနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ပံ့ပေး:
•အပြီးအစီးနိုင်ငံခြားရေးပါဝင်: အဆိုပါ SPF ဆူရာနမ်ပြင်ပနိုင်ငံများရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအခြားနိုင်ငံခြားသားများအကြိုးနိုင်ငံခြားသားများအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
•အခွန်ကင်းလွတ်: အဆိုပါ SPF နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအားလုံးအခွန်ကောက်ခံမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ မှတ်ချက်: အမေရိကန်အခွန်ထမ်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်မည်သူမဆိုမိမိတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
•အစာရှောင်ခြင်းတည်ထောင်: အပြင်ဆင်မှုအရှိန်အပျေါ မူတည်. အဆိုပါ SPK တနေ့ခြင်းတွင်ထူထောင်နိုင်ပါတယ်။
•ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: အဆိုပါ SPF ပိုင်ဆိုင်မှုဆန့်ကျင်တောင်းဆိုမှုများဖြည့်စွက်ထံမှအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်တည်ထောင်သူ၏အနာဂတ်အကြွေးတားဆီးပိုင်ဆိုင်မှုအပေါငျးတို့သပိုင်ဆိုင်သည်။
•အိမ်ရာစီမံကိန်း: SPF ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုမိသားစုအိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတစ်စုံလင်သောမော်တော်ယာဉ်။
ဆူရာနမ်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်း (SPF) အမည်
အဆိုပါ SPF ဆူရာနမ်အတွက်အခြားဥပဒေရေးရာ entity အသုံးပြုသောမနာမည်တစ်ခုရွေးချယ်ရမည်။
တစ်ဦး "ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းက" အတှကျဒတျချြဘာသာပြန်ချက်တစ်ခုခုကိုစကားလုံးကိုသုံးသို့မဟုတ်ရိုးရိုး "SPF" အဖြစ်တစ်ဆူရာနမ်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းမှများအတွက်အတိုကောက်စေခြင်းငှါအဘယ်အရပ် "Particuliere Stichting" ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်, ထိုစကားလုံးက "ဖောင်ဒေးရှင်းက" ကိုလည်း၎င်း၏အမည်ကိုအဆုံးတွင်အသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦး Corporation မှခြားနားချက်
တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်ရှယ်ယာရှင်များသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်ရှိခြင်းမဟုတ်သဖြင့်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းအနေဖြင့်မတူနိုင်, မမြို့တော်ရှယ်ယာသို့ကွဲကွာ။ သူတို့ရဲ့ရှယ်ယာရှင်များမှဖွကွေားသူကိုဒါရိုက်တာတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းဘုတ်အဖွဲ့နှင့်မတူဘဲအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များမှဖြေဆိုမထားဘူး။
တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်လည်းမဆိုမြို့တော်, ခွဲတမ်း, ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့ဝင်များရှိခြင်းမဟုတ်ကန့်အသတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီများထံမှကွဲပြားနေသည်။
တည်ထောင်သူတစ်ဦး Notary လုပ်ရပ်နှင့်အတူအခြေခံအုတ်မြစ်ဖွဲ့စည်းသည့်အချိန်တွင်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံး၏ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းပေမည်။ သို့မဟုတျ, တည်ထောင်သူနောက်ပိုင်းမှာအချို့ကနဦးပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပိုပြီးလွှဲပြောင်းပေမည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးသီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်သောအခြေခံအုတ်မြစ်ကပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အခြေခံအုတ်မြစ်မှသူသို့မဟုတ်သူမ၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏တည်ထောင်သူလွှဲပြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုပြီးနောက်အနာဂတ်အကြွေးတည်ထောင်သူရဲ့အကြွေးတွေများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းယူနိုင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်ကြဘူး။ သူတို့က "အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များ" သို့မဟုတ်အနာဂတ်အချိန်တွင်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ဖြစ်နိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုဆိုလိုရာ "စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ" အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်မှီ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအကြွေးတွေ '' အကြွေးအဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ပေးဆပ်ရန်အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကို attach သို့မဟုတ်သိမ်းယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ် '' ။
အဆိုပါ SPF ဆူရာနမ်အတွက်အရပ်ဘက်ဥပဒသက်သေခံရှေ့နေများ၏ရှေ့မှောက်၌လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ Notary လုပ်ရပ်နှင့်အတူထူထောင်နိုင်ပါတယ်။ တည်ထောင်သူဆူရာနမ်မှသွားလာနိုင်မပါလျှင်တစ်ဦးအခွင့်အာဏာဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကဒေသခံသက်သေခံရှေ့နေများ၏ရှေ့မှောက်၌လိုအပ်သောလက်မှတ် execute လိမ့်မည်။
တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းဆင်တူတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ယင်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုထွက်သတ်မှတ်ပေးသောပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဆောင်းပါးများ ပေး. စီရင်။ အဆိုပါဆောင်းပါးများပထမဦးဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ခန့်အပ်နှင့်အတူနှင့်မည်သို့စီမံခန့်ခွဲဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှား, ဒေသခံမှတ်ပုံတင်လိပ်စာ, ဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်မှုအခြေခံအုတ်မြစ်များဖျက်သိမ်းအပေါ်သို့ဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်နေကြသည်။ , အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်၏အမည်ပါဝင်ရမည်
ကနဦးစီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့သူတို့ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်းနှင့်လျော်ကြေးငွေစေခြင်းငှါဘယ်လိုကဤသို့ဆိုရာဆွဲသွင်းပါဝင်၏ဆောင်းပါးများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆောင်းပါးများမဟုတ်ရင်ဖော်ပြမထားရင်, ကနဦးစီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိမှာနေရာလွတ်ဖြည်။ အဆိုပါဆောင်းပါးအသစ်ကဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များခန့်အပ်ရန်နောက်ထပ်လူတစ်ဦးသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေစဉ်စီမံခန့်ခွဲဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဒါရိုက်တာများပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါဆောင်းပါးများစီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့၏အင်အားကြီးပေးပါသည်။ ထို့အပြင်ဆောင်းပါးများမန်နေးဂျင်းဘုတ်အဖွဲ့ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့သည်နှင့်ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ရှိပါတယ်ဘယ်အရာကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ designates လိမ့်မည်။
အခြေခံအုတ်မြစ်ကနေအကျိုးအမြတ်သူများက "အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ" အဖြစ်လူသိများကြသည်။ အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများမဆိုရှိနိုင်ပါသည်အဘယျသို့လူမျိုးပေါင်းစုံသို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်၏တည်ရာအရပ်နှင့်စပ်လျဉ်းတည်ရှိ။
ထို့ကြောင့်, non-နေထိုင်သူကိုတည်ထောင်သူ, Non-နေထိုင်သူအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်ဆူရာနမ်၏အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူအတူပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုအသင်းအဖွဲ့ကဲ့သို့တူညီသောအခွန်ကုသမှုရရှိသွား။ အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်တစ်စုံတစ်ရာလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝင်ငွေထုတ်လုပ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်ကြသည်မဟုတ်ကတည်းကအကျိုးခံစားခွင့်မှပိုင်ဆိုင်မှု၏ဝင်ငွေသို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးအားလုံးအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရလိမ့်မည်။
ရိုးအမြစ်ကိုအစိုးရနှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်အခြေခံအုတ်မြစ်၎င်း၏တည်ထောင်သူ, ထိုအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းအားလုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတစ်စုံတစ်ရာအများပြည်သူမှတ်တမ်းများပုဂ္ဂလိကနှင့်မတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ SPF ပြင်ဆင်မှု၏အမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်. တနေ့ခြင်းတွင်ထူထောင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဆူရာနမ်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်း (SPF) နိုင်ငံခြားသားများသည်ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း: အပြည့်အဝနိုင်ငံခြားပါဝင်မှု, စုစုပေါင်းအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်, privacy ကိုမြန်ဆန်ဖွဲ့စည်းခြင်း, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, လူအပေါင်းတို့စာရွက်စာတမ်းများအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။